BURMA: [Big Brothers & Sisters] KNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်များ စောင့်ကြိုပစ်ခတ်မှုကြောင့်...
[Big Brothers & Sisters] KNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်များ စောင့်ကြိုပစ်ခတ်မှုကြောင့်...
Burma Freedom 02 July 23:09
KNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်များ စောင့်ကြိုပစ်ခတ်မှုကြောင့် ခမရ(၅၄၇) တပ်ရင်းမှူးကျဆုံး .
စနေနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 02 ရက် 2011 ခုနှစ် စောသိန်းမြင့် သတင်း - ကေအိုင်စီ .
ကရင်ပြည်နယ်၊ လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်ခလယ့်ဒေးကား လမ်းအတိုင်း တက်လာသည့် အစိုးရစစ်တပ်အား ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် KNLA တပ်ဖွဲ့များကစောင့်ကြို ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ အစိုးရတပ်ဘက်က တပ်ရင်းမှူး တစ်ဦး အပါအ၀င် ၂ ဦး ကျဆုံးကာ ၄ ဦးထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟု KNLA ဘက်က ပြောသည်။
၎င်းက "ဒီနေ့မွန်းလွဲ ၁း၄၅နာရီအချိန်မှာ ခလယ့်ဒေးကားလမ်းအတိုင်း တက်လာတဲ့ ခမရ(၅၄၇)တပ်ရင်းကို ကျနော်တို့လူတွေ သွားစောင့်ပစ်တယ်။ အဲဒီမှာ ရန်သူ့ဘက်က ၂ဦးသေ၊ ၄ဦး ဒဏ်ရာရတယ်။ သေဆုံးသူ ၂ဦးထဲမှာ တပ်ရင်းမှူး ၁ဦးနဲ့ တပ်ခွဲမှူး ၁ဦးပါတယ်။ ဒဏ်ရာရရှိသူထဲမှာ တပ်ခွဲမှူး ၁ဦးနဲ့ တပ်ကြပ်ကြီး ၁ဦး ပါတယ်။ ဒဏ်ရာရတဲ့ တပ်ခွဲမှူးက လည်ပင်းမှာ ထိမှန်တဲ့ အတွက် အသည်းအသန်ပဲ။"ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ ပစ်ခတ်မှုမှာ မိနစ်ပိုင်းခန့်သာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး KNLA ဘက်က အပိုင်နေရာယူထားသောကြောင့် ထိခိုက်ကျဆုံးမှု တစုံတရာ မရှိကြောင်း ဗိုလ်မှူးစောအယ်ဆဲဆဲက ပြောသည်။KNLA တပ်မဟာ(၇)တွင် ယခုလအတွင်း အစိုးရစစ်တပ်နှင့် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ပြီး ယခင် ပစ်ခတ်မှု များကလည်း ယခုကဲ့သို့ အစိုးရစစ်တပ်ဘက်မှ တပ်ရင်းမှူးအဆင့်ရှိ သေဆုံးမှုများ ရှိခဲ့သည်တဆက်တည်းတွင် ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လ ၂၉ရက်နေ့ည ၁၂နာရီအချိန်တွင် နယ်ခြားစောင့်တပ်(BGF) တပ်ရင်း(၁၀၁၂) တပ်ရင်း မှူး ဗိုလ်မှူးစောဘိ ဦးစီးသည့်တပ်ဖွဲ့များက ဖာပွန်မြို့နယ်၊ ကမမောင်းကျေးရွာရှိ အစိုးရစစ်တပ်အား ၀င်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့သလို ဇွန်လ ၃၀ရက်နေ့ ညနေ ၄နာရီအချိန်တွင် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်၊ မြိုင်ကြီးရွာအနီးရှိ တခေါ့ဖိုးတွင် BGF တပ်ဖွဲ့ဝင် အချင်းချင်း ပစ် ခတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
၎င်းပစ်ခတ်မှုများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ယနေ့မနက်တွင် BGF အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် စောချစ်သူ(ယခင်ဒီကေဘီ အေ ၉၉၉ တပ်မ ဟာ ဗျူဟာမှူး)နှင့် BGF (၁၀၂၂) တပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်မှူးမုတ်သုန်တို့သည် ကားအစီး ၂၀ကျော်ဖြင့် မြိုင်ကြီးငူဒေသဘက်သို့ ချီ တက်သွားသည်ဟု ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့သူများရှိသလို စစ်ဘက် ဆိုင်ရာ သတင်းရပ်ကွက်အရလည်း သိရသည်။
Posted by Freedom Burma at 15:09